Xukuumadda Somaliland oo soo saartay xeer cusub oo la xiriira iibinta dadka iyo… | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xukuumadda Somaliland oo soo saartay xeer cusub oo la xiriira iibinta dadka...
Xukuumadda Somaliland oo soo saartay xeer cusub oo la xiriira iibinta dadka iyo…
Hargeysa (Dalkaan.com) – Baarlamaanka Somaliland ayaa maanta ansixiyey xeerka xakameynta iyo la dagaallanka tahriibka iyo ka ganacsiga dadka.
Guddoomiyaha guddiga xildhibaanada ah ee xeerkan soo diyaariyey Axmed Nuur Guruuje, oo BBC la hadlay ayaa sheegay in sharcigaan uu qabanayo hey’ad iyo shaqsiyaad intaba, hadii falalkaas lagu helo.
Axmed Guruuje, ayaa sheegay tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka bani’aadamka ay yihiin laba dambi oo weyn, oo haatan wixii ka danbeeya aysan Somaliland u dulqaadan doonin dadka ku kaca dambiyadaas.
Sidoo kale Guruuje ayaa sheegay in haddii dadka wax tahriibinaya ay dilaan qof kamid ah dadka ay tahriibinayaan, uu sharcigani dhigayo in iyagana la toogto, maadaama uu qofkaasi tahriibiyaha sababsaday.
“Hadii tahriibiyuhu uu qofka u geysto dil ama dhibaato kale waxuu noqonayaa qof dilay qof kale ama dhibateeyey, wuuna xeerkaan cadeynayaa dhib kasta oo dhaca iyo xaqiisa, sidoo kale dadka wax tahriibiya hadii wadamo kale ay joogaan oo dad Somaliland u dhashay ay dhibaato soo gaarto, xeerkaan wax-buu ka oranayaa,” ayuu yiri Axmed Guruuje.
Dhamaan dhinacyada ku lugta leh tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka ayuu uga digay in xeerkani qaban doono, sidoo kale waxa uu sheegay in hantida tahriibiyeyaasha lala wareegi doono.
Sidoo kale Axmed Guruuje waxa uu sheegay in xeerkaan uu dadka tahriibka ah u aqoonsan yahay dhibaneyaal, oo xaq ay yeelan doonaan, balse hadii ay cadaato in wax tahriibinta ay lug ku leeyihiin, waxay noqon doonaan dambiilayaal.
Ugu dambeyntii Axmed Guruuje oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Somaliland uu u xilsaaray diyaarinta xeerkaas ayaa sheegay mamnuucaya tahriibka iyo ka ganacsiga dadka, ayaa sheegay in maanta xeerka ay u gudbiyeen Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, si uu u saxiixo.
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota magaalada Ceelwaaq iyo...
TAHRIIBAYAAL SOMALIYEED OO ”TALYAANIGU SUN KU BUUFIYAY” ??
War Deg Deg ah: Macalinkii Barcelona Ee Ronald Koeman Oo Shaqo...
Doorashada kuraas aan lagu tartamin oo Muqdisho lagu qabtay – Sidee...
Xildhibaano cusub oo lagu dooray Muqdisho – Yaa kusoo baxay?